गाउँमा बाख्रा पालेर विदेशमा भन्दा बढी कमाइ ! – Etajakhabar
गाउँमा बाख्रा पालेर विदेशमा भन्दा बढी कमाइ !
बाबियाचौर, म्याग्दी, २८ फागुन – म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ कुटमुनीकी विष्णु खड्कालाई दशक अघिसम्म दुई÷चार हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्दा साहु कहाँ ऋण माग्न जानुपर्ने समस्या थियो ।
बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइने भएकाले बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नरहेका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका विपन्नका लागि घुम्तीकोष वरदान बनेको संगम म्याग्दीका अध्यक्ष दीपक पौडेलले बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण २८, २०७४ समय: १३:५६:४२